Puntland oo natiijada imtixaanka dugsiyada dhexe la shaaciyey iyo iskuulo la eedeyey (Dhegeyso) – Radio Daljir
Puntland oo natiijada imtixaanka dugsiyada dhexe la shaaciyey iyo iskuulo la eedeyey (Dhegeyso)
Agoosto 7, 2013 7:11 b 1
Garoowe, Aug 7, 2013 – Wasaarada waxbarashada ee Puntland waxay maanta shaacisay natiijada Imtixaankii dugsiyada dhexe ee deeganadan, kaasi oo is bedel weyn ka jiro sanadkaan marka la eego sanadihii hore, waxaana jira eedeym soo baxaya.
Kulan balaaran oo ka dhacay Garoowe ayaa lagu shaaciyey natiijada Imtixaanka, waxaana goob joog ahaa masuuliyiinta wasaarada sida Agaasimaha Guud, Madaxa Imtixaanaadka iyo Wasiirka Waxbarashada, sidoo kale waxaa joogay macalimiin iyo wakiilo ka socday iskuulada dhexe ee Puntland.
Dugsiyada dhexe ee Puntland ayaa qaarkood lagu eedeynayaa in ay ka jiraan qish ay heleen ardayda ka baxday fasalka 8-aad isla markasna u gudbay dugsida sare, Madaxda wasaarada ee maanta ku dhawaaqay natiijada Imtixaanka ma aysan shaacin iskuuladaasi, balse waxay sheegeen in la baari doono.
? Waa la hakiyey in la fasaxo imtixaankii ilaa Afar iskuul oo lagu tuhunsan yahay Qish, waa Dugsiga Qarxis, Siinay oo Badhan ku yaala, Xaaji Aadan oo ku yaala Dangoronyo, iyo Hil-dabay, waa la baarayaa Natiijadooda lamana sii daynayo ilaa Amar dambe? ayuu yiri Madaxa Imtixaanaadka Puntland Axmed Saahid.
Wasiirka waxbarashada ee Puntland Cabdi Faarax (Juxa) oo kulanka shaacinta natiijada iskuulada soo xiray, wuxuu sheegay in ay muhiim tahay in diirada la saaro tirada ardayda ee dhacday, kuwaasi oo gaaraya 1114 Arday iskuulada oo dhan, isagoo sheegay in kor loo qaadi doono kobcinta waxbarashada dhexe si loo yareeyo ardayda haraysa.
Wasiirku wuxuu kaloo sheegay in dib loo dhigay shaacinta natiijada iskuuladii la tuhmay in ay Ardaydoodu qishka heleen, wuxuuna goobta ku shaaciyey in uu jiro baaris iyo wadda-hadal ay la geli doonaan maamulada iyo masuuliyiin dugsiyada la tuhunsan yahay, isagoo arrintaasi ku tilmaamay mid aan la aqbali karin.
Dhegeyso Madaxa Imtixaanaadka Axmed Saahid oo ku dhawaaqaya Natiijada
Baahin: Arbaca, 8- AUG 2013, Caawa Iyo Daljir Axmed Sh Maxamed Tallman ~ Daljir ~ Boosaaso
Gadiid u rarnaa hay?ada cunada aduunka ee WFP oo xalay lagu gubay deeganada Gobolka Bari
cabdale 4 years ago
imtixaanka iy tuusa qaabka loo galayo